Khabiirka Cilmi-baarista Calaamadaha Waxyaabaha Aasaasiga ah Waa Inaad Ka Ogaato Regex Scraper
Samee codsiyo leh tibaaxo joogto ah:
Codsiyo kala duwan ayaa lagu sameeyay ereyo joogto ah. Iyadoo PowerGREP, waxaan ka raadin karnaa faylasha iyo faylasha kumbuyuutarkayaga, macluumaadka dib u habeyn iyo macluumaad ka soo qaad kheyraadka kala duwan. PowerGREP mashiinka dabeecada joogtada ah wuxuu ku habboon yahay Pearl,. Shabakada netka iyo jaantusyada iyo waxay faa'iido u leeyihiin barnaamijyadayaasha, webmasters, iyo horumarinta app. Haddii aad rabto inaad sameyso barnaamij app ama mobile, waxaad ku badbaadin kartaa waqti iyo tamar badan oo leh tibaaxo joogto ah. Waxaad u baahan tahay inaad geliso dhowr lambar si aad u heshid app. RegexBuddy iyo EditPad Pro waa labo barnaamij oo dhammeystiran oo lagu dhisay ereyo joogto ah.
Ku habboon ardayda aan barnaamijka ahayn:
Nooca reengxigu wuxuu la mid yahay xargaha bartilmaameedka. Nidaamkani wuxuu ka kooban yahay isku xigxiga jajabka. Nimid waa hal dhibic oo ah qaabka loo yaqaan 'regex' kaas oo bartilmaameedsanaya qaabka ugu fiican. Waxaa jira in ka badan afar iyo toban calaamado regex, oo ku salaysan macnaha qoraalka iyo codsiyada.
XPath - Waa qalab aad u xooggan:
XPath waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican uguna faa'iido badan . Waxay soo aruurisaa qaababka xogta laga helo boggaga internetka ee kala duwan, waxay abuurtaa xarfo iyo waxay abaabulaan xogta qaab la akhrin karo oo loo qaabisan karo. XPath waxay marka hore tilmaantaa qoraalka websiteka, waxay lafagureysaa tayada iyo xajmiga tayada aad u leedahay. Mashruucan kala-guurka ah iyo qulqulka webka wuxuu bixiyaa codsiyada dib-u-dhiska, sida soo-celinta dib u celinta, jilayaasha POSIX iyo beddelaadyada.
Hal line of Regex ayaa badali kara 100 xariijimo oo qashin ah:
Hal khadad xaji ah ayaa ku filan in lagu badalo ilaa 100 xariijin oo ah code. Taas macnaheedu waa inaadan u baahnayn inaad barato habka barnaamijka casriga ah si aad shaqo u hesho. Erayada joogtada ah, waa mid aad u fudud in xogta wareejinta laga helo bogag kala duwan oo abuuraya astaamo iyo xogo.
Hadalka joogtada ah waa qalab qiimo leh oo lagu aqoonsanayo iyo xoqidda webka . Waxay bixiyaan waaya-aragnimo aad u fiican oo ku habboon labadaba xirfadleyaasha iyo kuwa aan xirfadlayaasha lahayn Source .